Mas’uuliyiin Caan ah oo lagu dilay Qarax ka dhacay Magaalada Muqdisho – Mareeg.com somalia, World News and Opinion.
Mas’uuliyiin Caan ah oo lagu dilay Qarax ka dhacay Magaalada Muqdisho
Warar dheeraad ah ayaa laga helayaa qarax xoogan oo daqiiqado kahor ka dhacay qeyb kamid ah degmada Dharkeenley ee Gobolka Banaadir, kaasi oo ah miino nooca dhulka lagu aaso ah lagana hago meelaha fog-fog.
Qaraxaas ayaa waxaa lala eegtay gaari nooca Soomaalida u taqaano Qooqan oo ay la socdeen Guddoomiye ku-xigeenka amniga iyo siyaasadda deegaanka Garasbaaleey iyo Guddoomiyaha dhalinyarada deegaankaas, xili marayeen xaafadda Xoosh.
Dad goobjoogayaal ah ayaa sheegay in qaraxa kadib ay rasaas xoogan fureen Ciidamo ka tirsan dowladda oo goobta ka Agdhawaa, waxaana qaraxaas ka dhashay khasaaro dhimasho ah.
Allaha u naxariistee waxaa ku geeriyooday Qaraxa Guddoomiye ku-xigeenkii amniga iyo siyaasadda deegaanka Garasbaaleey Cali Maxamed Macalin iyo Guddoomiyihii Ururka dhalinyarada deegaankaas Cabdirashiid Cali Dubbad.
Ciidamo ka tirsan kuwa Booliska dowladda Federaalka Soomaaliya oo tegay goobta ayaa kasoo qaaday Meydadka Mas’uuliyiinta geeriyooday, isla markaana waxaa la geeyay mid kamid ah Isbitaalada ku yaalla Magaalada Muqdisho.
Guddoomiyihii Ururka dhalinyarada deegaanka Garasbaaleey Marxuum Cabdirashiid Cali Dubbad ayaa waxaa uu ahaa wiil dhalinyaro ah oo aad u firfircon, sidoo kalena kasoo shaqeeyey mid kamid ah Idaacaddaha ku yaalla Caasimadda dalka ee Muqdisho.
Muddooyinkii ugu dambeeyay Magaalada Muqdisho ayaa waxaa kusoo badanayay qaraxyada miino ee dhulka lagu aaso ah, waxaana inta badan qaraxyadaas ka dhashay khasaaro isugu jira dhimasho iyo dhaawac, iyadoona Al-shabaab ay sheegteen.
Wararkii ugu dambeeyay Weerar khasaaro geystay oo ka dhacay Kismaayo